Asingazivikanwe MacBook Pro inowanikwa mumabhenji | Ndinobva mac
Isingazivikanwe MacBook Pro inowanikwa mumabhenji
Ruben gallardo | | MacBook Pro
Kana iwe uchirangarira nemazvo, nebatch yazvino yeMacBook Pro malaptop ekutanga ongororo dzakauyawo, kunyanya nekuti zvinoenderana nevashandisi vanonyanya kuda vakakumbira imwe nhanho mukuita. Sekureva kwavo, kabhuku aka, kunyangwe mune yayo yepamusoro "Kumusoro" gadziriso, yanga isina kukwana uye haigone kuve inokwanisa kutakurika kune nyanzvi. Hatichataure chero chinhu pamusoro pemutengo wayo.
Kumwe kunyunyuta kubva iyo yazvino mutsara weLaptop MacBook Pro ndiyo yaive null mukana wekuwedzera iyo RAM ndangariro pamusoro peiyo yakazara 16 GB. Sezvaungave wafungidzira, chikamu chevashandisi chinoda kukwanisa kusvika ku32 GB ye RAM. Nekudaro, izvi zvinodiwa zvinogona kuwanikwa muNhasi Keynote kutanga na18: XNUMX PM.
Sezvakataurwa kubva kuAppleInsider, mumwe munhu anga achifananidza isingazivikanwe MacBook Pro. Uye isu tinoti hazvizivikanwe nekuti kumisikidzwa kunoonekwa mudhatabhesi kunoratidza kuti ine processor yeIntel Core i7 iyo nhasi isipo pakati pesarudzo dzekugadzirisa Kuti ive chaiyo, iri Intel Core i7-8750H nhanhatu-yakakosha processor inomhanya 2.21 GHz wachi frequency. Uye zvakare, kana mushandisi achida, kumhanya uku kunogona kuwedzerwa kusvika pa4,1 GHz, Asi chii chakavhiringidza huwandu hwakazara hwemakorari: parizvino ma4-core modhi aripo.
Zvichakadaro, mumuyedzo wakaitwa muna Chikumi 1, iyi MacBook Pro inowana zvibodzwa zvakakwirira kwazvo - mune multicore modhi - inosvika 22.316 mapoinzi achienzaniswa ne16.999 mapoinzi anosvika kumusoro kwazvino kwerudzi. Asi kana izvi zvisingaite sezvidiki, kushamisika kukuru kunopihwa neuwandu hwe RAM iyo iyo laptop yakawanikwa inosangana pahwaro hwe GeekbenchKune avo venyu vaifarira 32GB MacBook Pro, heino humbowo Tichaona izvo zvakashamisa masikati ano zvakatimirira. Isu isu tichakuudza zvese zvakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Isingazivikanwe MacBook Pro inowanikwa mumabhenji
Pasiwedhi chengetedza mafaera ako uye mafolda ane Chakavanzika Folda
macOS Yakakwira Sierra ine yakasviba modhi yakafanana ne macOS 10.14